Elman iyo Gaadiidka oo maanta ku kulmaya Horyaalka Somalia Premier League | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA SOMALIDA - Elman iyo Gaadiidka oo maanta ku kulmaya Horyaalka Somalia Premier League
Elman iyo Gaadiidka oo maanta ku kulmaya Horyaalka Somalia Premier League
Kulan ka tirsan horyaalka kubadda Cagta Somalia Premier League ayaa wuxuu maanta ka dhici doonaa Garoonka Koonis ee degmada Cabdicasiis, iyadoo ciyaartaas ay isku fara saarayaan naadiyada Elman iyo Gaadiidka.
Elman Sanadkan kuma jirto qaab ciyaareedkii wacnaa ee Sanadkii hore ay ku billaabatay ciyaaraha horyaalka, waxaa sidoo kale bandhig loota ku billaabatay Gaadiidka oo aan weli Guuleysan ciyaaraha Horyaalka.
Elman 6 kulan oo ay horay u ciyaartay 2 mar ayey badisay halka 4ta kalena laga badiyay, iyadoo ciyaarihii ugu dambeeyay ay muuqdeen kuwo shaqada looga raacdeyn karo macallin Cabdi Joon.
Tababarahaan oo ka mid ah kuwa ugu kooxo Dhisidda wanaagsan horyaalka ayaa Sanadihii lasoo dhaafay wuxuu kooxo xoog badan kasoo dhigay Naadiyada, Horseed iyo Dekadda, sidoo kale xiddigo badan ayuu usoo qaaday kooxda Elman in kastoo dhaawacyo iyo isla qabsi la’aanta ciyaartoydu ay sabab u tahay Guuldarrooyinka is xiga eek u dhacay Naadiga.
Wararka kulankan nagala soco insha’allah.